အောင်လအန်ဆန်း နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲကို ဘယ်အချိန် မှာ ဘယ်လိုင်း ကနေ ကြည့်ကြမလဲ ??? – Lat Khat Than
အောင်လအန်ဆန်း နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲကို ဘယ်အချိန် မှာ ဘယ်လိုင်း ကနေ ကြည့်ကြမလဲ ???
လာမယ့် အောက်တိုဘာလ (13) ရက်နေ့ ကတော့ အာရှက MMA ပရိသတ်တွေ အတွက် ထူးခြားတဲ့ နေ့တစ်နေ လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ အဲဒီနေ့မှာ တစ်နေကုန် One Championship ပွဲစဉ်တွေကို တိုက်ရိုတ် ကြည့်ရှုခွင့် ရရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဂျပန်မှာ ကျင်းပမယ့် အဲဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ အမည်ကို One : Century လို့ အမည်ပေးထားပြီး ၊ One Championship သမိုင်းကြောင်း တစ်လျှောက် အခမ်းနားဆုံး နဲ့ အာရှ ရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး MMA ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပြိုင်ပွဲအတွင်း ကမ္ဘာကျော် ဖိုက်တာတွေရဲ့ ချန်ပီယံလု ပွဲပေါင်း များစွာ ပါဝင်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ၊ ပွဲကိုလဲ Part 1 နဲ့ Part2ဆိုပြီး ခွဲခြား ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင် အောင်လ အန်ဆန်း ရဲ့ ပွဲစဉ်ကတော့ Part2ရဲ့ အဓိက ပွဲအဖြစ် သတ်မှတ် ထားတာ ဖြစ်တာကြောင့် ၊ အောက်တိုဘာလ 13 ရက်နေ့ ရဲ့ ညနေခင်းလောက်မှာ စတင် ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ်ကြဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
Part 1 ပွဲစဉ်တွေထဲမှာတော့ အမျိုးသမီး Atomweight World Championship လုပွဲ အဖြစ် စင်္ကာပူက နာမည်ကျော် ဖိုက်တာ အိန်ဂျလာ လီ နဲ့ တရုတ်သူ ရှောင်ဂျီနန် တို့က ထိုးသတ်သွား မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Grand Prix Championship ရဲ့ ဗိုလ်လုပွဲတွေကိုလဲ ဒီကဏ္ဍမှာပဲ ဆက်လက် ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖလိုင်းဝိတ် Grand Prix Championship ဗိုလ်လုပွဲ အဖြစ် UFC ကနေ ပြောင်းရွှေ့ ထိုးသတ်လာတဲ့ ဒီမက်ထရီးရပ် ဂျွန်ဆင် ဟာ ဖီလစ်ပိုင် နိုင်ငံသား ဒန်နီ ကင်ဂတ် နဲ့ ဗိုလ်လုပွဲ အဖြစ် ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ်မှာပါ။ လိုက်ဝိတ် Grand Prix Championship ဗိုလ်လုပွဲ မှာတော့ စင်္ကာပူ က ဖိုက်တာ ခရစ်ရှန် လီ ဟာ တူရကီ က အာစလာနာလိဗ် နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် သွားမှာပါ။ (အိန်ဂျလာ လီ နဲ့ ခရစ်ရှန်လီ တို့ဟာ မောင်နှမ တွေ ဖြစ်ပါတယ်။)
မြန်မာပြည်က အခြား ဖိုက်တာ တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဖိုးသော်ဟာ တောင်ကိုရီးယားက ဖိုက်တာ ယွန်ချန်မင် ကို Part 1 ခေါင်းစဉ်အောက် မှာပဲ ထိုးသတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Part 1 ပွဲတွေ ကိုတော့ အောက်တိုဘာလ 13 ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး Skynet ရှိတဲ့ ပရိသတ်တွေက မနက် Skynet Sport3နဲ့ Skynet Sports HD လိုင်းတွေမှာ မနက် 6.30 ကနေ စတင် ကြည့်ရှုလို့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချန်ပီယံ လုပွဲတွေ ကိုတော့ နံနက် 9.30 ဝန်းကျင် မှာ စတင်မှာ ဖြစ်ကာ ၊ MNTV မှာလဲ ပြသသွား မယ်လို့ လို့ သိရပါတယ်။
Part2ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ MMA ရွှေခါးပတ် လုပွဲ က2ပွဲ နဲ့ မွေးထိုင်းချန်ပီယံလုပွဲ 1 ပွဲ ၊ Kickboxing လုပွဲ တစ်ပွဲတို့ နဲ့ အတူ အခြား ပွဲစဉ်ပေါင်း များစွာ ပါဝင်လျှက်ရှိနေပါတယ်။ Parts2ရဲ့ အဓိက ပွဲကတော့ အောင်လ အန်ဆန်း နဲ့ ဗီရာ တို့ရဲ့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံ လုပွဲ ဖြစ်ပြီး ၊ ဘီဘီယာနို ဖာနန်ဒက် နဲ့ ဘယ်လီဂွန် တို့ရဲ့ ဘန်တန်ဝိတ် ရွှေခါးပတ်လုပွဲကလဲ ပရိသတ်တွေ အတွက် ဆွဲဆောင်မှု အပြည့် ရှိနေဦးမှာပါ။
ဟန်ရေးပြ အစီအစဉ် ကိုတော့ မနေ့က ဂျပန်မှာပဲ ပြုလုပ်သွားခဲ့ပြီး ၊ ဗီရာဟာ အောင်လ ရဲ့ ခြေထောက် ကန်ချက်တွေကို ခုခံဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်လာတယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ဟန်ရေးပြသွား ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် သူဟာ ဟန်ရေးပြတဲ့ အခိုက်အတန့် အတွင်းမှာပဲ ချွှေးတွေ တော်တော်ထွက်နေ ခဲ့တာကြောင့် ၊ သက်လုံး ပိုင်းတော့ အားနည်းနေတယ်လို့ ယူဆချင်စရာပါ။
အောင်လ ကြိုးဝိုင်း ထဲကို ဟန်ရေးပြဖို့ ဝင်ရောက်လာ ချိန်မှာတော့ ဂျပန်က ပရိသတ်တွေက တစ်ခဲနက် ကြိုဆို ခဲ့ကြသလို ၊ မြန့်မာ့ သူရဲကောင်းကြီးကလဲ တိုက်ကွက် မျိုးစုံကို ပြသသွားခဲ့ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဗီရာကို ထိုးသတ် ရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် အောင်လ ရဲ့ ဝိတ်ကလဲ ပြည့်လာတယ် လို့ ခံစားရပြီး ၊ သူ့ရဲ့ ကန်ချက်တွေ ကို ထုတ်သုံး ချိန်မှာလဲ ၊ ပြင်းအားက တော်တော်လေး ကို ရှိနေခဲ့ကာ သတိထားမိပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အောင်လ ရဲ့ နည်းပြ ဟင်နရီ ဟုဖ် ဟာ ကန်ချက်တွေ လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ နေရာမှာ နာမည်ကြီး တစ်ယောက် ဖြစ်တာကြောင့် ၊ အခုလို အားပါတဲ့ ကန်ချက်တွေ ထုတ်သုံး လာဖို့ ပြင်ဆင်လာခဲ့ဟန် ရှိပါတယ်။
Part2ပွဲစဉ်တွေ ကိုတော့ အောက်တိုဘာလ 13 ရက်နေ့ နေ့ခင်းပိုင်း မြန်မာ စံတော်ချိန် 2.30 မှာ စတင်မှာပါ။ အောင်လ နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်မယ့် အချိန်ကတော့ ညနေ 5.00 နာရီမှာ ဖြစ်လာဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီပွဲစဉ် ကိုတော့ Skynet မရှိသူတွေ အနေနဲ့ MRTV Entertainment ကနေလဲ ပြသသွားမယ် လို့ ကနဦး သတင်းတွေ အရ သိရပါတယ်။
Posted in Local News, Sport News
Previous post ခရုဇ်ဒုံးကျည်နဲ့ ခေတ်မီဒရုန်း ပေါင်းစည်း အုပ်စုနဲ့ ဆော်ဒီကရေနံစက်ရုံတွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့နည်းအတိုင်း အစ္စရေးကို အီရန်က တိုက်ခိုက်လာနိုင်
Next post မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် ညိမ်းသော် “တာဝန်မယူဘဲ တိုက်ပြေး လုပ်ခဲ့လို”့ ရဲစခန်းရောက်သွား